Ciyaartoyda iyo Discs Disclaimer Super Audio Compact (SACD)
Disclaimer Super Audio Compact (SACD) waa qaab dijitaal ah oo loola jeedo in lagu ciyaaro cajalad ficil ah. SACD waxaa la soo bandhigay 1999-kii shirkadaha Sony iyo Philips, isla shirkadahaas oo soo bandhigay CD-du. Noocyada SACD ee waligeed laguma qabin ganacsiga, iyo koritaanka MP3-ga iyo muyuusigga dijital ah, suuqa SACDs ayaa yaraaday.
SACDs iyo CDs
Qalab adag ayaa lagu duubayaa 16-ka mid ah xallinta qiyaasta qiyaasta 44.1kHz. Ciyaartoyda SACD iyo Discs waxay ku salaysan yihiin qaabka tooska ah ee Dijital (DSD), oo ah qaab 1-jajab ah oo leh qiyaas imtixaan ah 2.8224MHz, oo ah 64 jeer heerka qiyaasta wadajirka ah. Heerka sarrifka sare ayaa natiijooyinka soo noqnoqonaya jawaab celin balaadhan oo dheellitiran iyo faahfaahin dheeraad ah.
Noocyada soo noqnoqda ee CD waa 20 Hz ilaa 20kHz, oo u dhiganta maqalka dadka (inkasta oo aynu da'daadu kala yaraynayso qaar ka mid ah). SACD ee xajinta tirada waa 20Hz ilaa 50 kHz.
Noocyada kala duwan ee CD-ga waa 90 darajo (dB) (tirada dadka ee halkan waa ilaa 120 dB). Qeybaha firfircoon ee SACD waa 105 dB.
Dhegaha SACD ma haystaan ​​wax fiidiyoow ah, oo kaliya maqalka.
Imtixaan si loo ogaado haddii dadku maqli karaan faraqa u dhexeeya CD iyo SACD diiwaanka la sameeyay, natiijooyinkuna guud ahaan waxay muujinayaan in qofka caadiga ahi aanu sheegi karin faraqa u dhexeeya labada nooc. Natiijooyinka, si kastaba ha ahaatee, looma tixgelin.
Noocyada SACD Discs
Waxaa jira saddex nooc oo ah "Super Compact Disc Discs: hybrid, laba lakab, iyo lakabka keliya.
Dareemayaasha qalabka ayaa leh laba lakab, lakab sare oo waxqabad leh oo ka ciyaari kara oo kaliya cayaartoyda qalabka leh ee SACD, iyo daaha CD-ga oo ka ciyaari doona ciyaartoyda CD-ga caadiga ah. Waxaa intaa sii dheer, qaar ka mid ah qalabka Hybrid SACD waxay leeyihiin 5.1 wadada hareeraha iyo wadada stereo. Qalabka isku-dhafan ayaa kaliya lagu ciyaari karaa ciyaartoyda isboortiga ee SACD.
Lakabka kaliya ee lakabka SACD wuxuu cayaari doonaa oo keliya ciyaartoyda qalabka leh ee SACD oo aan ku jirin ciyaaryahannada CD-ga.
Diskoolada laba-laabanka ah ayaa dukaanka ku duuban laba jeer oo muusikada ah sida hal lakab oo lakab leh, laakiin ma ciyaari doono ciyaartoyda CD-yada mana aha mid caadi ah.
Xitaa nidaam qalafsan oo qalafsan ayaa ka faa'iideysan kara caddaynta kordhaysa iyo fiditaanka SACD. Heerka sarrifka sare (2.8224MHz) wuxuu ka qaybqaataa jawaab-celinta dheeraadka ah, iyo SACD-du waxay awood u yeelan karaan ciyaaro firfircoon oo firfircoon oo faahfaahsan.
Maadaama ay maqal badan oo SACD ah ay yihiin noocyada isku dhafan, waxay ka ciyaari doonaan SACD iyo ciyaartoyda CD-ga caadiga ah, si ay ugu raaxaystaan ​​nidaamka maqalka ee guriga, iyo sidoo kale gaari ama qalab maqal ah. Waxay ku kacaan waxoogaa ka badan CD-yada caadiga ah, laakiin qaar badan ayaa aaminsan in tayada codkooda weyn ay ku haboon tahay qiimaha sare.
SACD Ciyaartoyda iyo Xiriirinta
Qaar ka mid ah ciyaartoyda SACD waxay ubaahan yihiin isku-xir dhexdhexaad ah (laba channel ama 5.1 channel) inay qaataan si ay u cayaaraan lakabka sACD ee sarreeya sababtoo ah arimaha ilaalinta nuqul. Lakabka CD-ga ayaa lagu ciyaari karaa iyadoo la adeegsanayo isku-xirnaan dijitaal ama aragti muuqaal leh. Qaar ka mid ah ciyaartoyda SACD waxay u fasaxaan xiriirka teknooloojiyada (mararka qaarkood loo yaqaan iLink) inta u dhaxeysa ciyaaryahanka iyo kan wax iibsadaha, taas oo ka takhalusi doonta baahida xiriirka analoogga.
Tilmaamaha A / V Connections - Fursadaha Lahaanshaha
Sidee loo Xalliyaa Dhibaatooyinka Xiriirinta HDMI
Fahmidda Xidhiidhka Dhexdhexaadinta Dhexdhexaadnimada iyo Awood-is-dhejinta
LG Channel Plus - Waxa aad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
Key Finder v2.2.4
St. Patrick's Day Saarista Sawirada
LTE: Qeexitaanka tignoolajiyada LTE 4G
Ku soo celi PC-kaan: Dhameystir Socod
Baro in aad isticmaasho Filters si aad u aragto keliya Mail Mail Muhiim ah ee Yahoo Mail
SiriusXM Raadiyaha waxay bixisaa jimicsi iyo jimicsi
Windows Best WYSIWYG HTML Editors
Sida Loo Gudbiyo Maktabadda iTunes-Goob Goob Ah
Epson PowerLite Guriga Cinwaanka 730HD Muuqaal Muuqaaleed
Onkyo Sheegidda Cinwaanka LS-B50 Dib u Habeynta Nidaamka Baraha
Sida loo Magacaabo Faylasha HTML
Tusaha Lacagta Lacagta Layli ee LCD
Maxay Faylka MPEG?
Ka hor inta aadan iibsanin Tiyaatarka Aqalka Hawlaha - aasaasiga ah
Badankooda Cayaarta Kumbiyuutarka Kumbuyuutarka
Prince of Persia: Warrior gudahood khiyaamo - Gamecube
Websaydhada Sawirrada iyo Sawirada
Tababarada Smartphone: Beddelida LG G Flex SIM Card
Sidee loo Sameeyaa Goobtaada Dhiirigelinta Cunugaada
Sifaha Calaamadaha Calaamadaha / Calaamadaha Jajabyada Jajabka
Sida loo rakibo barnaamijyada laga saaray App Store